Shiinaha L-valine CAS 72-18-4 Loogu talagalay soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha (AJI USP) | Salaad
L-valine CAS 72-18-4 Fasalka Cuntada (AJI USP)
Magaca Badeecada ： L-Valine
CAS MAYA .: 72-18-4
Muuqaalka cry Kiristaalo cad ama budada kareemka ah
Waxyaabaha alaabta: Udgoon, Dhadhaminta macaan laakiin qadhaadh ka dib, Lumida biyaha iyo si dhib leh ku milma aalkolada ethyl
Xirxirida ： 25kg / kiish, 25kg / durbaan ama sida macaamiisha looga baahan yahay
Magaca Badeecada: L-Valine
CAS MAYA.: 72-18-4
L-Valine (oo loo soo gaabiyo) waa mid ka mid ah 18ka amino acids ee caadiga ah, iyo mid ka mid ah sideed amino acids oo muhiim u ah jirka aadanaha. Waxaa loogu yeeraa silsilad isku xiran oo amino acids ah (BCAA) oo leh L-Leucine iyo L-Isoleucine sababtoo ah dhammaantood waxay ku jiraan silsilad dhinaca methyl ah oo ku jirta qaab dhismeedkooda.
L-Valine waa mid ka mid ah amino acids aliphatic ah oo ka mid ah labaatan nooc oo ah amino acids proteinogenic ah iyo amino acid (BCAA) oo xayawaan laftiisu aan soo saari karin oo ay tahay inay ka qaataan cuntada si ay ula kulmaan baahiyahooda nafaqada; sidaa darteed L-valine waa amino acid muhiim ah. Saamaynta ugu weyn sida soo socota:
(1) Lagu daro naasnuujinta 'cuntooyinka kordhiya waxsoosaarka caanaha. Farsamadu waa in L-Valine uu saameyn ku yeelan karo jiilka alanine iyo sii deynta muruqyada, iyo alanine-ka cusub ee laga helay nuujinta 'plasma right right wuxuu caawiyaa unugyada naaska si ay ula qabsadaan baahida alaabta ceyriin ee gulukooska sidaasna ay ku timaado soosaarida caanuhu.
(2) Wanaajinta shaqada difaaca xoolaha. L-Valine wuxuu dhiirrigelin karaa lafaha xayawaanka T unugyada si ay ugu beddelaan unugyada T ee qaangaarka ah. Yaraanta valine-ka ayaa hoos u dhigta walaxda C3 iyo heerarka kala-gudbinta, iyadoo si weyn u horjoogsanaysa koritaanka thymus iyo unugyada lymfoid dusha sare ah isla markaana keenaya ka-hortagga koritaanka unugyada dhiigga cad ee aashitada iyo dhexdhexaadka ah. Mar hadii la waayo valin, digaagdu waxay sameyn doonaan jawaab celin antibody ka gaabis ah oo ka yar fayraska cudurka Newcastle.
(3) Saameyn ku yeelanaya heerarka xayawaannada 'endocrine'. Daraasaduhu waxay muujiyeen in beero nuujinta iyo nuujinta nuujinta cunnooyinkooda oo lagu daro L-valine ay kordhin karaan uruurinta prolactin iyo hormoonka koritaanka ee ku dhaca plasmahooda.
(4) L-valine sidoo kale waxay muhiim u tahay ujeedooyinka hagaajinta unugyada iyo soo celinta. Waxaa lagu magacaabaa amino acid silsilad silsilad ku xidhan ama BCAA, oo la shaqeeya laba BCAA oo dheeri ah oo loo yaqaan L-Leucine iyo L-Isoleucine.
Khasaare ku saabsan qalajinta
Xeryahooda la xiriira
Wareeg gaar ah
Hore: L-Tryptophan CAS 73-22-3 ee Fasalka Pharma (USP)
Xiga: L-Leucine CAS 61-90-5 Fasalka Cuntada (AJI USP)
L-Threonine CAS 72-19-5 Fasalka Cuntada (FCC / AJI / ...
L-Isoleucine CAS 73-32-5 Fasalka Cuntada (AJI USP ...
L-Methionine CAS 63-68-3 Fasalka Cuntada (AJI / USP)
L-Leucine CAS 61-90-5 Fasalka Cuntada (AJI USP)
L-Phenylalanine CAS 63-91-2 ee Fasalka Cuntada (FCC / ...
L-Lysine HCL CAS 657-27-2 ee Fasalka Cuntada (FCC / AJ ...
L-Valine 72-18-4, Fasalka L-Threonine Pharm, Nafaqada xoolaha, 73-32-5 L-Isoleucine, Fasalka Farmashiyaha L-Leucine, Fasalka Cuntada L-Threonine,